Okufanelekile.Kuqediwe. Igumbi lokulala elingu-1 ku-Exclusive Condominium - I-Airbnb
Okufanelekile.Kuqediwe. Igumbi lokulala elingu-1 ku-Exclusive Condominium
Santa Cruz de la Sierra, Departamento de Santa Cruz, i-Bolivia
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Juan Pablo
I-1 Bedroom Apartment etholakala endaweni ekhethekile yedolobha; amasu okufinyelela ukusuka edolobheni kuya esikhungweni sebhizinisi, izikhungo zokuthenga, izindawo zokudlela, isikhungo somlando kanye nesikhumulo sezindiza. Ilungele izivakashi zebhizinisi noma eholidini. I-Condominium Enkulu enezindawo ezingaphezu kuka-2,000m2 zezindawo ezivamile nezokungcebeleka, abasebenzi bezokuphepha kanye nokugadwa okungu-24/7, inketho yokupaka ephephile emgwaqeni onethrafikhi encane.
Le ndlu isendaweni Floor 2nd i Condo okukhethekile emzini ukuthi ine Ukubhukuda Pools nge ukubukwa-panoramic komuzi, 2 hlupha nokuzijabulisa izindawo izoso, Dry Sauna, 3 Private Cinema Amakamelo izinhlelo umsindo professional, Gcwalisa Gym futhi Imidlalo Igumbi ne-Billiard Table and Television.
Naphezu kwenani elikhulu lezindlela zokufinyelela endaweni, ithule kakhulu futhi ayinazo izimoto ezincane. Amamitha ambalwa ukusuka e-Ave. Banzer naseSegundo Anillo, kanye nase-Paseo Boulevard de la Monseñor Rivero.
Ifulethi linesistimu "engenakhiye" ngekhodi eyabelwe kanye nokhiye ophathekayo. Noma kunjalo, ngitholakala kakhulu ukweluleka ngokuhlala kwakho edolobheni noma ezweni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Santa Cruz de la Sierra namaphethelo